विप्लव निकट पत्रकारहरूले अब जनपत्रकार संगठनकाे नामबाट गतिविधि गर्ने
काठमाडौं । नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी निकट पत्रकार संगठन क्रान्तिकारी पत्रकार संगठनको नाम फेरिएको छ । नयाँ नाम जनपत्रकार संगठन नेपाल राखिएको संगठनका केन्द्रीय अध्यक्ष प्रकाश डुम्रेले जानकारी गराए । मंगलबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै उक्त संगठनले आफूहरुको संगठनले नाम परिवर्तनको जानकारी दिएको छ ।
मेयर रेनु दाहाललाई उप-मेयर पार्वती शाहले लगाइन् यस्ताे आरोप
काठमाडौँ । भरतपुर महानगरपालिकाका उपप्रमुख पार्वती शाह ठकुरीले महानगरप्रमुखले कार्यपालिका बैठक सञ्चालनमा आफूसँग समन्वय नगरेको आरोप लगाएकी छन् । उपप्रमुख ठकुरीले आज काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गरी आफूले जिम्मेवारी निर्वाह गर्दा आइपरेका समस्या र महानगरपालिकाको अवस्थाका बारेमा जानकारी गराइन् ।
नाटकले वर्तमान र भविष्य देखाउँछ : प्रधानमन्त्री ओली
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नाटक विधा समाज परिवर्तनको एउटा महत्वपूर्ण क्षेत्र भएको भएकाले यसले समाजको वर्तमान र भविष्य देखाउने बताएका छन् ।
पश्चिम सेती नबन्नु दुर्भाग्यपूर्ण : डा. भट्टराई
डोटी । नयाँ शक्ति नेपालका संयोजक बाबुराम भट्टराईले सुदूरपश्चिमको विकासको मेरुदण्डका रुपमा रहेको पश्चिम सेती परियोजना नबन्नु दुर्भाग्यपूर्ण भएको बताएका छन् । दीपायलमा आयोजना गरिएको एक कार्यक्रममा उनले राजनीतिक दलका नेताको खिचातानीका कारण पश्चिम सेती बन्न नसकेको आरोपसमेत लगाए ।
मुलुक समृद्धिकाे दिशमा उन्मुख भइसक्याे : झलनाथ खनाल
इलाम । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले वर्तमान सरकारको पाँच वर्षमा विकासको जग बस्ने बताएका छन् । माईनगरपालिकास्थित वडा नं. ५ मा आयोजित कार्यकर्ता भेटघाट कार्यक्रममा उनले वर्तमान सरकारले विकास निर्माणको काम गर्न शुरु गरेको उल्लेख गरे । उनले मुलुक अहिले समृद्धिको दिशामा उन्मुख भइसकेकाले यसमा सबैले सहयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
४७ साल पछिका सबै नेता र प्रशासककाे सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्छ : कमल थापा
काठमाडौँ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष कमल थापाले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि उच्चस्तरीय छानबिन आयोग गठन गरी वि.सं. २०४७ पछिका राजनीतिज्ञ, प्रशासकलगायतको सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आज काठमाडौँमा आयोजना गरेको अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा उक्त आयोगलाई स्वतन्त्र र निष्पक्षका साथ काम गर्न सरकारले सहयोग गर्नुपर्ने आवश्यकता औल्याउँदै उनले छानबिनका क्रममा नेपालीले विदेशमा लुकाएर राखेको सम्पति र राष्ट्रियकरण गर्न र शङ्कास्पद व्यक्तिको बैंक खाता तत्काल रोक्का गरी अवैध कारोवारमा संलग्न व्यक्तिलाई कानूनबमोजिम कारवाही गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
गैरआवासीय नेपालीलाई नेपालकाे विकासमा याेगदान गर्न आह्वान
काठमाडौँ । परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले गैरआवासीय नेपालीलाई मातृभूमि नेपालको विकासमा योगदान गर्न आह्वान गरेका छन् । संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानव अधिकार परिषद्को चालीसौँ बैठकमा भाग लिने सिलसिलामा जेनेभामा रहेका मन्त्री ज्ञवालीले गैरआवासीय नेपाली सङ्गठन र समुद्रपार नेपाली मञ्चका पदाधिकारीसँग आइतबार साँझ भएको छलफलमा विदेशमा रहेका नेपालीलाई आफ्नो जन्मभूमिको विकासमा सघाउन आग्रह गरेका हुन् ।
‘आजाद’को स्मृति, अब हामी द्रुत गतिमा जान्छौँ : प्रधानमन्त्री
काठमाडौं । गणतन्त्रका ल्याउन लडेका सिन्धुलीका ऋषिराज देवकोटा ‘आजाद’लाई भिमानको जङ्गलमा पञ्चायत सरकारले क्रूरतापूर्वक हत्या गरेको खबर वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जेलमै सुनेका थिए ।